कलियुगका कुरा: November 2011
अर्कैको बिहेमा पुगेछ
अस्ति एक जना साथीले 'तँ त टिभी पत्रकार, बिहेको लागि क्यामेरामेन खोज्देन' भन्यो। (नेपालमा टिभी पत्रकारलाई अन्यले सबैभन्दा योग्य यही उत्सवका बेलाँ क्यामेरा खोज्नका लागि मान्छन् ) एकजना क्यामेरामेन साथीलाई पठाएँ। उताबाट बेहुला साथी फोनमा भन्छ - क्यामेरामेन देखेकै छैन। यता साथीले देको ठेगानाको गल्लीमा पसेर खिच्न थालेका क्यामेरामेन भन्छ 'म खिचिरहेकै छु।' टेलिकमको मोबाइलमा बल्लबल्ल दुई जनाबीच वार्ता हुँदा थाहा भएछ, क्यामेरामेन साथीले त अर्कैको बिहेमा आधा खिचिसक्यारछ।
कति धेरै हो बिहे आजभोलि... कति जना त भोज पनि अर्कैको खाएर फर्कँदा हुन्। एउटै पार्टी प्यालेसमा पनि बार बारेर दुई तीन वटा बिहे जो भइरहेको छ।
बाबुरामले किन धेरै मन्त्री थप्या ?
कति धेरै दिन सोचेंपछि बल्ल बुद्धि आयो, बाबुराम जी ले धेरै मधेशी नेताहरुलाई मन्त्री बनाएको त सरकार टिकाउन होला अनि धेरै नै माओवादी कार्यकर्तालाई पनि मन्त्री बनाएको चाहिं कामरेडहरु वैद्य - बादल ग्याङमा नजाउन् भनेर होला है।
(गर्नु गर्यौ बलराम भै‌सी पालेर गीतको नयाँ रिमिक्स तत्काललाई यस्तो हुनुपर्छ)
गर्नु गर्यौ बाबुराम मन्त्री थपेर,
ढुङ्गेललाई चोख्याउन खोजेर,
देशको ध्यान शान्ति स‌विधानबाट अन्तै मोडेर।
गाउँमा पसल खुल्ने क्रम
पहिलो पसल चुरोट र रक्सीको खुल्छ। जहाँ नुन, तेल, मसला र प्याज पनि पाइन्छ। दोस्रो पसल भन्ने कि होटल भन्ने चाउमिन र सुकुटीको भाको खुल्छ। जहाँ चना र समोसा पनि हुन्छ। तेस्रो पसल मासुको खुल्छ, अनि चौथो पसल हुन्छ ब्युटी पार्लरको। अनि ती सबै पसलमा मोबाइलको रिचार्ज कार्ड पाइन्छ भनेर लेखेको पनि हुन्छ। (बदलिंदो नेपाली समाज)
कसलाई गुणस्तरको प्रमाणपत्र
हैन! यो ISO भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS भन्दा नि सस्तो छ कि के हो ? अनि यो प्रमाणपत्र जसलाई पनि / जेलाई दिइन्छ कि के हो? हिजो यसो टिभी हेर्दै थिएँ, अमेरिका डिभी चिट्टा भर्ने एउटा पसलले पनि ISO प्रमाणपत्र प्राप्त डिभी भर्ने पसल भनेर विज्ञापन गरिरहेको थियो। बुझिनसक्नु रहेछ हउ गुणस्तरको प्रमाणपत्र पनि...